पुस्ता फेरियो, विभेद कायमै छ
गैरदलित साथीहरु हामीसँग गएका बेला ‘बाहिरै बसेर खाऊँ भित्र गर्मी छ’ भन्छन्। तर उनीहरू एक्लै गएको बेला मस्तले घरभित्रै खान्छन्। गैरदलित ब्राह्मण मित्रहरू छुवाछुत नभएको जस्तो गर्छन् तर उनीहरूको घरभित्र पुग्ने बित्तिकै हतारहतार कुर्सी वा बस्ने यस्तै केही कुरा बाहिर राख्छन् र ‘स–सम्मान’ बसाल्छन्।
अब दुई सैनिक जवानमाथि भएको यातनाको क्षतिपूर्ति कसले दिने? उनीहरूका परिवारले पाएको सास्तीको मूल्य कसले तिर्ने? र आइन्दा नेपाली सेनाभित्र हुने यातना न्यूनीकरण गर्न कस्तो कानुनी प्रावधान अवलम्बन गर्ने भन्ने विषयमा राज्य र अझ सैनिक नेतृत्व गम्भीर हुनैपर्छ।
माओवादीको नैतिक र राजनैतिक क्षयीकरणसँगै समाजमा स्थापित हुनै लागेका मूल्य, मान्यता र आदर्श माटोमा मिल्ने क्रम झन् बढ्यो। अहिलेका समाजवाद र समाजवादीहरूको चिन्तन, शिक्षण र गन्तव्य हेर्दा लाग्छ– अबको समाजवादमा प्रश्न बन्देज छ र हरेक खालका समाजवादमा पुग्नेहरुका लागि फरक फरक गाडी तयार भएका छन्।